Beckham oo ka hadlay tabaraha kooxda England - BBC Somali
Beckham oo ka hadlay tabaraha kooxda England
5 Nofembar 2011
David Beckham, aya sheegay in uu doonayo in tababare English ah uu hogaanka u qabto kooxda qaranka England kadib marka uu Fabio Capello xilka ka dego kadib tartanka Euroe 2012.
Kabtankii hore ee England, ayaa uu sheegay BBC Sport in fursado badan aysan jirin dhowrkii sano ee ugu dambeeyay, oo England uu maamulayay tababar guul ka keenay dunida oo dhan oo ah Fabio Capello.
Balse wuxuu yiri waa in horey loo sii socdaa oo qofta kasta oo English ah buu yiri wuxuu doonayaa tababare English ah.
Beckham wuxuu kaloo sheegay in Wayne Rooney ay waajib tahay in lagu daro kooxda ka qaybgalaysa tartanka Euro 2012.
Image caption Fabio Capelo
Beckham wuxuu hadda ka cayaaraa dalka Maraykanka, wuxuuna u dheelaa kooxda LA Galaxy.
Tan iyo markii uu shaqada ka tagay Kevin Keegan oo maamulayay kooxda qaranka England sanadkii 2000, waxaa jagadan tababarenimada England soo qabtay, Sven-Goran Eriksson oo u dhashay Sweden iyo Capello oo u dhashay Talyaaniga, iyadoo muddo 16 bilood ah uu sanadkii 2008 cayaarihii euro uu maamulayay kooxda Steve McClaren.
Dhinaca kale oo kaliya lix tababarayaasha tartanka England Premier League ayaa English ah, waxay kala yihiin Steve Bruce wuxuu tababaraa kooxda Sunderland, Roy Hodgson oo West Brom tababare u ah, Alan Pardew oo Newcastle maaamula, Harry Redknapp Tottenham ayuu hogaaminayaa, Mich McCarthy oo kooxda Wolve s layliya iyo Neil Warnock oo kooxda Queens Park Ranger tababare u ah.
Raga in ay badali karaan tababare Capelo la hadal hayo waxaa ka mid ahStuart Pearce, Alan Shearer, Sam Allardyce, Alan Curbishley iyo Beckham laf ahaantiisa.